I-Mini Groove Deep Ball Bearings I-Structure Ngokujwayelekile Yenziwe - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Ukwakhiwa Kuvame Ukwenziwa Nge
I-miniature Deep Groove Ball Bearings Isakhiwo ngokuvamile senziwe
Amabherebhe amabhola amancane aphansi kakhulu okuyizona ezithinta kakhulu ekilasini lamabherethi. I-Ordinary efana ne-Xiaobian emgwaqweni ngeke ibe ngabantu abaningi abangabheka, kepha lokhu okujwayelekile okudlala indima akuyona into evamile, namhlanje sikunikeza ukukhuluma ngezinsimbi ezinkulu ezihamba phambili ezincane ezincane ezithwala ibhola eliphethe ilungu. I-groove ejulile yamabhola amabhola ebangeni lobubanzi obungama-26mm ngaphansi kwesibalo esibizwa ngokuthi yi-high-speed micro-miniature ebhokisini elikhulu ibhola ibhola, ubude obuyi-26mm bubuye bube yingxenye yeminwe. Ekufakweni kwesikhathi esitholakalayo lapho umshini wokunyathelisa uzoba ngowokuqala ekucindezelekeni kwe-shaft, phambanisa umbuthano we-metal assembly casing kungenza indandatho yangaphandle yokuthwala futhi ithwale isihlalo sobukhosi ngendandatho yangaphakathi kanye ne-shaft enobudlova lapho ukuthwala ingcindezi Emgodini wokuthwala, isakhiwo se-casing lapho isidingo sokubambisana ngaso sonke isikhathi ukucindezela ukubhekwa komzimba ngaphakathi nangaphandle. Isivinini esiphezulu se-micro-miniature ibhola eliphethe ikhanda Nakuba amakhono amancane kakhulu, lokhu kuthwala okuncane esithuthuthu kodwa kuyinto ebaluleke kakhulu!
I-groove encane encane ye-ball ibhethri ingahle ibe lula, i-single-row encane encane ye-groove ibhethini yokubheja ingakwazi ukumelana nemithwalo yemisebe ye-radial ne-axial, futhi ivumele isivinini esikhulu. I-groove encane ye-groove ibhethini ye-ball ayihlukanisi. Ukufakwa kwezingubo ezincane ezifakwe emangcwabeni amancane okugqoka kungabondli futhi kungenza kube lula ukuhleleka. Njengoba i-micro-deep groove ball bearings ikhono lokuzihlanganisa lilinganiselwe, ngakho-ke isidingo sokuthwala indawo yokuhlala esihle, kuhle ukugxila ekusebenzeni, ukwandisa ukucindezeleka, ngaleyo ndlela kufinyelele ukuphila okubhekene nakho. I-groove encane encane ye-ball bearings ingavumela kuphela i-angle encane ye-deflection, ebuye ixhomeke kubukhulu bomthwalo. Amapayipi ama-micro-deep groove asetshenziselwa kabanzi ezinhlobonhlobo zezicelo.
Landelela ama-Roller Bearings Ngama-lubrication akwanele
I-Deep Groove Ball Bearings I-Main Performance Is